एमाले फुटाउँदा मैले मात्रै २७ करोड उठाएँ : केशव स्थापित - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
एमाले फुटाउँदा मैले मात्रै २७ करोड उठाएँ : केशव स्थापित
प्रदेश ३ को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीबाट वर्खास्त केशव स्थापितले एमाले विभाजनको बेला आफूले बामदेव गौतमको आग्रहमा २७ करोड रुपैयाँ उठाएको बताएका छन्।
‘पार्टी विभाजन अगाडि वामदेव कमरेडले धेरै पैसाको जोहो गर्नुपर्छ,’ भन्नुभयो, स्थापितले भने, ‘मैले आँट गर्नुस्, अगाडि वढ्नुस् भनेँ। उपत्यका र बाहिरका धेरै व्यापारीलाई यो पार्टी नम्बर वान हुन्छ, लगानी गर भनेँ। त्यतिखेर मेरो पहलमा मात्रै २७ करोड रुपैयाँ संकलन भएछ।’
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित अन्र्वार्तामा स्थापितले यस्तो दावी गरेका हुन्। पत्रकार खगेन्द्र पन्तले स्थापितसँग १२ अभियोगमा केन्द्रीत भएर कुराकानी गरेका छन्।
अध्ययन, प्लानिङ र तयारीविनाका अकाशे योजनाका बारेमा घन्टौँ गफ दिनुहुन्छ । त्यही भएर मान्छेहरू तपाईंलाई ‘देशकै अब्बल गफाडी’ पनि भन्छन् । तपाईंलाई यो उपाधिप्रति कुनै खेद छैन, खुसी नै हुनुहुन्छ।
पहिला मेरो बारेमा मान्छेहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । स्थापित भनेको कुनै जात होइन, हामीले मल्लकालको सुरुवातमा पाएको पदवी हो । काठमाडौं दरबार स्क्वायरको तलेजु बनाएपछि हाम्रो पुर्खाले पाएको पदवी हो।
तपाईंहरूले काठमाडौंमा देख्ने इनारदेखि पुरातात्विक सम्पदा सबै मेरो पुर्खाले बनाएका हुन् । त्यसकारण मेरो रगतमै त्यो छ । यहाँका मन्दिर, कुवा, दरबार, त्यहाँ लगाइएका झ्याल, त्यहाँ भएका मेटेरियलबारे मेरो पुर्खाले हस्तान्तरण गरेको कुरा त मसँग छ ।
त्यसको प्रविधि मात्रै होइन, तिनको जगमा के हालेको छ भन्ने पनि मलाई थाहा छ । अरूलाई यही कुरा सुनाउँदा ‘गुप्त कुरा गर्‍यो,’ ‘लुकेको कुरा गर्‍यो,’ ‘हावा कुरा गर्‍यो’ पनि भन्छन् । कसैले रुख देख्यो भने आगो बाल्ने सोच्छ।
राजनीतिक रूपमा कहिल्यै स्थिर हुनुभएन । पञ्चायतमा जनपक्षीय उम्मेदवार बन्नुभयो । बहुदल आएपछि एमालेबाट महानगरको मेयर बन्नुभयो । एमाले फुटाएर मालेतिर लाग्नुभयो । राजाको सक्रिय शासनकालमा मेयर मनोनीत हुँदै प्रजा परिषद् ब्युँताउनुभयो । बीचमा माओवादीको निकट भएर पनि बस्नुभयो । ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा संघीय समाजवादीको उम्मेदवार बनेर एमालेका योगेश भट्टराईलाई हराउन भूमिका खेल्नुभयो । सबैतिर डुल्दा पनि केही पार नलागेपछि फेरि एमालेमै फर्किनुभयो।
म विगत धेरै कोट्याउन चाहन्नँ । पछिल्लोपटक म खुट्टा भाँचिएर घरमा बसिरहेको थिएँ, कुनै पार्टीमा थिइनँ । पार्टीमा आफ्नो प्रभुत्व भइसकेपछि केपी ओलीले मलाई डाक्नुभयो।
उहाँले घाममा राखेर मलाई भनेका सबै शब्द अहिले पनि याद छ । ‘केशव तिम्रा सपना पूरा भए देश त कहाँ पुग्छ पुग्छ । १० प्रतिशत मात्रै पूरा भए पनि हुन्छ । म आफैं ठाउँमा नभएका वेला प्रोटेक्सन दिन सकिनँ, अरूले तिमीलाई बुझ्दै बुझेनन् ।
युवा संघमा काम गरेदेखि म केशवलाई चिन्छु, हामी आन्द्रा गाँसिएका मान्छे हौँ । विकासका सवालमा मलाई केशव चाहियो । विगततिर जाँदै नजाऔँ, भोलि नै पार्टी प्रवेश गर्नुपर्‍यो’ भन्नुभयो । र, भोलिपल्टै एमाले प्रवेश गरेँ।
आफ्नो बोलीमा लगाम राख्न सक्नुहुन्न । प्रदेश सरकारको मन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकमै मुख्यमन्त्रीलाई अपशब्द बोल्नुभयो । पार्टीको नेता तथा सरकार र जनताको प्रतिनिधिको गरिमा राख्नुभएन ।
मुख्यमन्त्रीलगायतले सार्वजनिक गरेको यो मित्थ्या आरोप हो । त्यहाँ मन्त्रीहरू थिए, प्रमुख सचिव थिए । चारजना त सचिवहरू थिए, दुईजना महिला सचिव । मैले गालीगलौज गरेको भए उनीहरूलाई सोध्दा पनि हुन्छ नि । हो, तनावचाहिँ भएको हो।
देशमा राजनीतिक विकृति भित्र्याउन पनि भूमिका खेल्नुभयो । राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार बनाउने योजनासहित सांसदहरूलाई समिट होटेलमा थुनेर राख्नुभयो । तत्कालीन प्रजातान्त्रिक युवा संघ९अहिलेको युवा संघ नेपाल०को अध्यक्षको हैसियतमा थुनिएका सांसदहरूलाई अस्लिल सिनेमा हेर्ने चाँजोपाँजो मिलाउनुभयो।
त्यतिखेर म त युवा संघको अध्यक्ष मात्रै थिएँ । पार्टीले युवा संघलाई सांसदहरू भाग्लान्, यिनीहरूको रखवाली गर भनेपछि त गर्नैपर्‍यो नि।
लिला श्रेष्ठ सुब्बा भन्ने सांसद हुनुहुन्थ्यो । उहाँले ‘सांसदहरू भाग्न थाले, नबस्ने भन्दै छन्’ भनेपछि एउटा टिभी लगेर राखिदिएको हो।
‘बेन्डिट क्विन’ भन्ने फुलनदेवीको फिल्म लगाइदिएको हो । त्यो हेर्दाखेरि पर्दामा देखियो । केही मान्छे पर्दाकै मुनि सुतेका रहेछन् । फिल्ममा बलात्कारका सिनहरू पनि थिए, त्यस्तै आवाज आउने भयो ।
त्यो यौन व्यवसाय गर्नेको फिल्म त होइन, यथार्थमा आधारित हो । हेर्नचाहिँ त्यहाँ भएका सबै सांसदले हेरेका हुन् । जब कि मैले अहिलेसम्म त्यो फिल्म हेरेको छैन है । यही विषय माधव नेपाल, आरके मैनाली, साहाना प्रधानकोमा कम्प्लेन गरियो ।
मन्त्री हुँदा पनि आफ्नै स्वभावअनुसार हावादारी गफ दिँदै हिड्नुभयो । कहिले ‘काम नपाएर लोखर्के गनेर बसेको छु’ भन्नुभयो । पार्टी र सरकारको निर्णयविना नै काभ्रेमा राजधानी बनाउने र त्यसका लागि २ सय रोपनी जग्गा खोजिरहेको बताउनुभयो । सम्बन्धित जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूलाई पत्तै नदिई धादिङ गएर ‘सुनको टुक्रा’ बनाउँछु भन्नुभयो।
लोखर्के मैले प्रदेश र संघीय सरकारलाई भनेको हुँ । मुख्यमन्त्रीको जति क्रियाशीलता देखिनुपर्‍थ्र्यो, त्यो देखिएन । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म र योजना आयोगलाई चित्त बुझाउन नसकेपछि केही पनि आएन । नमुना कार्यक्रम पनि आएन, बजेट पनि आएन ।
कर्मचारी पनि नआएपछि काम गर्ने के रु मजस्तो कवि हृदय भएको मान्छेले लोखर्के गन्नुबाहेक अरू के गर्ने? त्यो मैले भनेकै हुँ । अरूले बुझून् भनेरै भनेको हुँ । केपी ओलीजीले उखानटुक्का भन्नुहुन्छ नि, त्यो ठ्याक्कै उहाँको कपी गरेको हुँ । ‘लोखर्के गनेर बसेको छु, केही काम भएन’ भनेको भाइरल भयो नि ।
तपाईंका नैतिक आचरणमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्यो । काठमाडौंको मेयर हुँदा ‘सेक्स्युअल ह्यारेसमेन्ट’ गरेको भन्दै दुई महिलाले तपाईंमाथि आरोप नै लगाए।
यो घटना छाडेर मेरो धारणा सुन्ने हो भने फरक छ । मान्छेले प्रेम प्रस्ताव नराखीकन प्रेम अंकुरण हुन्छ? म त प्रेम गरून् भनेर लभपार्क बनाउनुपर्छ भन्ने मान्छे । मेरो छोराले बुहारी बनाउनुपर्‍यो, मेरी छोरीले ज्वाइँ बनाउनुपर्‍यो ।
मलाई जुन आरोप लगाइयो नि त्यो गहिरिएर के भन्न खोजेको हो बुझ्नुस् है । उहाँले केशव स्थापित महानगरमा आएपछि मलाई हटाइयो भन्नुभयो । तर, उहाँले पाँच वर्ष त काम गरेको रहेछ नि ।
यस्तो आरोप मलाई चारपटक आयो । पहिलो, म मेयरको उम्मेदवार हुँदा । अर्को, म संघीय समाजवादीबाट उम्मेदवार हुँदा । त्यतिखेर म उम्मेदवार हुँदा उहाँ संघीय समाजवादीको केन्द्रीय प्रचार समितिको सदस्य हो।